विमानस्थलबाट उपकुलपति, अस्पतालबाट डाक्टर ‘उठाउने’ सरकार – Nirantarkhabar
क्यानडा जान लागेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विमानस्थलबाटै ‘उठाएर’ बालुवाटार पुर्याएको एक साता नबित्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई अस्पतालबाटै ‘उठाएर’ मन्त्रालय लगेका छन्।
‘उहाँले कोठामा आएर सिधै ‘तपाईंले राम्रो काम गर्नुभएको छैन, जनयुद्धका महान योद्धाहरूको मन दुखाउने काम नगर्नुस्, राम्रो हुने छैन’ भन्दै मलाई धम्काउनुभयो,’ उनले भने। सुवेदीले यही लवजमा डा. अधिकारीलाई कोठामा एक्लै राखेर तर्साएका थिए। अधिकारीले भने आचारसंहिताविपरित गलत रिपोर्ट बनाउन नसक्ने अडान राखे।
उनीहरूले यसपालि आफ्नो अपांगता प्रतिशत बढाइदिन दबाब दिए। अधिकारीले ‘हचुवामा अपांगता प्रतिशत बढाउन मिल्दैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि ती माओवादी कार्यकर्ता फर्किए। त्यसको करिब एक घन्टापछि रिपोर्ट बनाउन आएका तिनै व्यक्तिसहित १०–१२ जनाको समूह हुलहज्जत गर्दै डा. अधिकारीको ओपिडीमा छिरे। ढोकामा भित्रबाट चुकुल लगाइदिए। र, आफूले भनेबमोजिम अपांगता प्रतिशत बढाएर नयाँ रिपोर्ट बनाउन दबाब दिए।
डा. अधिकारी भने वास्तविकभन्दा बढी अपांगता देखाएर बढी भत्ता लिन आफूलाई दबाब दिइएको बताउँछन्। उनले गलत रिपोर्ट नबनाउने अडान मात्र लिएनन्, बरु अपांगतासम्बन्धी नीति फेर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको बताए।
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनको नियमनका लागि कानुन जारी गरिने
तालाबन्दी खोलि पठनपाठन सुचारु गर्न नेबिसंघको माग, माग पुरा नभएसम्म ताला नखोल्नेः लिम्बु